'Trailer New Resident' na-ekpughekwu ihe omimi - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Trailer New Resident' New Trailer Na-ekpughekwu ihe omimi
Akụkọ Ntụrụndụ ụjọEgwuregwu vidiyo
Isiakwụkwọ na-esonụ nke Resident evil na-achọ ịbụ nnukwu ịhapụ ihe anyị na-ahụbu n'usoro. Site na akuko nke ndi n'uwa ihe nlere anya nke a di ka Resident evil nke ahụ na-esite n'èzí nke igbe nke aka ya na ịtọlite ​​maka ihe nwere ike ịbụ nke kacha mma RE na-anwụ anwụ egwu egwu anyị nwere.
Ọ na-adọrọ mmasị anyị mgbe niile na Capcom, anaghị arapara n'otu akụkọ ma ọ bụ ịbịaru nso mgbe ọ bịara Resident evil. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ntụgharị nke aha gara aga, ha ga-ekpori ndụ na isi ọhụụ. Onye bi na ya Ọjọọ 4 malitere omume ahụ. Kemgbe ahụ, usoro ahụ enweela ọ funụ na ịpụ n'èzí nke onwe ya na iwebata mgbanwe.
Na ụgbọala ọhụrụ na-adọkpụ ị ga-elerukwu ụwa a anya. Ihe nlere anya nke ọma ihe Ethan Winters na-eme na Obodo Nta, yana obere backstory na Obodo Nta. Ọ na-egosikwa na ị nwere ike ịnọnyere ụfọdụ ndị ọhụụ a hụrụ vampire na ụmụ ya nwanyị. Ọ dị ka, ha na-alụso onye iro a na-anaghị ahụ anya ọgụ ma ọ na-egosi na ị nwere ike inyere ha aka ime nke ahụ.
Resident evil ga-adị na PlayStation 5, PlayStation 4, Usoro Xbox X | S, Xbox One, Steam na Stadia bido na May 7. Egwuregwu ga-adị na ọkọlọtọ, deluxe na ndị nchịkọta.
Gịnị ka unu chere? You ga-atụtụ Obodo Ọjọọ Ọjọọ Bi? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Ugbo ala Djinn dị ebe a iji rịọ gị ka ị dịrị ndụ ruo etiti abalị. Lelee ya ebe a.
Capcomchrisfield egwuregwuResident evilVillage